apple iphone 12 mini bhatiri hupenyu bvunzo: zvakanyanya sei kushata?
Kuru Nhau & Ongororo Apple iPhone 12 Mini bhatiri hupenyu bvunzo: yakanyanya sei kushata?
Kana iwe uchida mafoni macompact, iwe uchada iyo iPhone 12 Mini. Iyo iri mhando isingawanzoitika: super compact foni, diki pane idiki diki dzenhare mu2020, asi nediki diki saizi, iwe unongoziva kuti hazvidzivirike kuti inouyawo nekadiki bhatiri sero.
Uye zvirokwazvo zvinoita: iyo iPhone 12 Mini yakagadzirirwa ne 2,227 mAh bhatiri sero mukati, ingangoita hafu yebheteri saizi yevakawanda vevamwe Android. Muchokwadi, heino maitiro eiyo iPhone 12 Mini bhatiri inofananidzwa nehukuru hwedzimwe iPhones mumhuri:
Saka ... nebhatiri diki zvakadaro, ko zvakadii chaiko, chaicho-chaihwo hupenyu hwepasi bhatiri? Zvakanaka, usatarisira mhuka yebhatiri asi kuti unzwisise zvakakwana hupenyu hwebhatiri reMini, isu tinomhanyisa boka re-rakadzika bhatiri bvunzo uye isu tave nemhedzisiro.
Tarisa uone yedu yakadzika iPhone 12 Mini ongororo pano
Apple iPhone 12 mini $ 69999 Tenga kuApple $ 69999 Tenga kuVerizon $ 69999 Tenga kuAT&T $ 69999 Tenga paGoodBuy $ 69999 Tenga paT-Mobile
iPhone 12 Mini: YouTube Vhidhiyo Kutenderera Bhatiri Bvunzo
Kana iwe uchida kuona akawanda mavhidhiyo paYouTube, uyu muedzo unenge wakanyanya kukosha kwauri.
Iyo iPhone 12 Mini bhatiri inotora maawa mashanu nemaminitsi gumi ichiridza kumashure mavhidhiyo asingamire kubva ku100% kudzamara foni yafa. Uye izvo & maapos; s zviri kure chaizvo pazasi pevhareji, asi zvinonakidza, iyo iPhone 12 Mini yakanyatsogara zvishoma kupfuura iyo iPhone SE 2020 edition. Izvo zvicha, zvakadaro, zvinopedzisira zvakati wandei zvishoma pane zvakajairwa iPhone 12 uye 12 Pro, iyo inopedza ingangoita awa nehafu zvimwe pamuedzo iwoyo mumwe.
Uye iyo Android makwikwi? Zvakanaka, mune uno bvunzo, iwo & apos; makore ari pamberi! Pixel 5 yaizotora maawa masere nemaminetsi makumi mana nepfumbamwe pakuyedzwa bhatiri reYouTube vhidhiyo, nepo iyo Galaxy S20 ichikwirisa machati mumaawa gumi nemaminetsi makumi maviri, izvo & apos; zvakapetwa hupenyu hwebhatiri hweiyo iPhone 12 Mini!
iPhone 12 Mini: Webhu Kutsvaga Webhu Bvunzo
Yedu webhu kubhurawuza bvunzo inomiririra chairo kushandiswa kwezuva nezuva: hapana chinoda mabasa, kungo bhurawuza uye kupururudzira kutenderedza foni, uye bvunzo iyi ndeimwe yeakanakisa zvinoratidza nezve hupenyu hwebhatiri rwefoni yekushandisa chete.
Nhau dzakanaka ndedzekuti iyo iPhone 12 Mini yakaita basa rakanakisa pairi, tichifunga bhatiri rayo diki zvirokwazvo. Iine mamakisi emaawa angangoita gumi nerimwe, haina kunyatsonaka seiyo iPhone 12 uye 12 Pro, asi iri nani zvakanyanya kupfuura isingadhuri iPhone SE uye isiri kure nevari kukwikwidza neApple neinenge yakapetwa kaviri saizi yayo yebhatiri. Basa rakanaka, Mini!
iPhone 12 Mini: 3D Kubheta Bhatiri Bvunzo
Apple iPhone 12 6h 46 min
Whoa! Isu takaona iyo iPhone 12 uye iPhone 12 Pro ichikundikana yedu 3D yemitambo bhatiri benchmark zvinosiririsa , uye izvo zvakange zvichishamisa. Foni yakatanga kudziya kusiyana nechero imwe foni yatakaedza uye bhatiri racho raingonyungudika. Isu taive tichida chaizvo kuona kana iyo iPhone 12 Mini inotambura nenyaya dzakafanana uye chii chiri icho chinokonzeresa.
Zvino zvatave kumhanya zvakafanana 3D yemitambo bhatiri bvunzo paMini, tinogona kusimbisa kuti inotambura nemhedziso imwecheteyo nyaya, asi sezvo iine bhatiri rakatetepa, rinogara kunyange zvishoma kumaawa maviri chete nemaminitsi makumi maviri nemaviri! Inotoda kuburitsa nekukasira sekuchaja kwayinoita! Izvo & apos; s zvisina musoro!
Sezvingatarisirwa, isu taifanirwa kuongorora uye timu yedu yekuongorora yakapfeka giya ravo rekutamba ndokutanga kutamba mitambo yakasiyana siyana. Sezvineiwo, takacherekedza nyaya imwecheteyo mune mimwe mitambo, semuenzaniso, Minecraft yanga ichirwara nenyaya yakafanana neyedu isu nemaapos tanga tiri mumuedzo wedu. Mimwe mitambo, zvisinei, yaitaridzika kunge isina kubatika: Kufona kweDuty Nhare, zvine nharo mutambo unozivikanwa kwazvo we mobile wa2020, wakamhanya zvakanaka. Muchokwadi, takatamba ingangoita awa yeCoD Mobile (graphic mhando yakaiswa kune Yakakwira Zvakanyanya uye furemu rate yakamisirwa kumusoro) uye bhatiri pane yedu iPhone 12 Mini yakadonha kubva pakutanga kwe71% kusvika 52% mushure meawa yekutamba. Iye zvino izvo zvine musoro zvakanyanya, uye zvaizopa iyo iPhone 12 Mini yakazara ye3D yemitambo bhatiri hupenyu hweanosvika maawa mashanu.
Parizvino, zvinoita sekunge mimwe mitambo inoita kuti iyo A14 imhanye zvakasununguka uye zvemahara, saka zvinogara zvichirova pasimba rakazara uyezve matambudziko anoitika. Iwe unozoona mudziyo wako uchidziya zvakanyanya uye uchidhonzera bhatiri kunge anopenga, nepo mimwe mitambo ichiisa makapisi paGPU, kana zvirinani usape & nguva dzose kumhanya nekufema kuzere. Isu tinoshuvira kuona kana zvidzoreso zvemimwe yemitambo iyi zvichizochinja mamiriro acho uye isu tichave tichiteedzera iyi nyaya zvakanyanya.
Pakazara, kana isu tichifanira kukoshesa nyaya dzinopisa nemimwe mitambo, iyo iPhone 12 Mini yakaita chaizvo chaizvo. Icho & apos; s hachisi chaicho chepamusoro-cheki bhatiri anoita, kwete kana padyo, asi inobata ivhu rayo mushe mushe mukushandisa kwemazuva ese uye kana iwe usinga sundire zvakanyanyisa, iwe unofanirwa kukwanisa kupfuura kunyange iwo mazuva akareba usina kudikitira kunze kwefoni yako kufa usati wadzoka kubva kubasa.
open sosi yekushandisa ekuyedza maturusi
mira auto play pafacebook
Moto Z2 Varidzi vemasimba paT-Mobile, AT & T uye Sprint vanoudzwa 'Hapana Pie yako!'
IOS 14 nhungamiro: Heino & maapuro ekuchinja mamaki pane yako iPhone
New Dell Venue 8 Pro piritsi ine Windows 10 ikozvino yave kuwanikwa kutenga muUS
Java Random Nhamba Yezvizvarwa
Sangana neDISH, iyo Sprint nyowani, inogona kukwikwidza neT-Mobile pazvirongwa zve5G?